बालविकासका विद्यार्थीले सोधे– गाउँँको फोहोर के गर्ने ? | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / बालविकासका विद्यार्थीले सोधे– गाउँँको फोहोर के गर्ने ?
बालविकासका विद्यार्थीले सोधे– गाउँँको फोहोर के गर्ने ?
Posted by: युगबोध in संक्षिप्त समाचार June 9, 2019	0 81 Views
घोराही। ‘प्लाष्टिक नजलाउने भन्नुहुन्छ’– बालविकास मावि घोराहीमा अध्ययनरत विद्यार्थीले सोधे– ‘गाउ वस्तीको फोहोर के गर्ने ?’ उनीहरुले विद्यालय सरसफाइस“गै गाउ“वस्तीको पनि हुनुपर्ने बताए।
समाजका बारेमा चिन्ता गर्ने र समस्या समाधान गर्ने उपाय खोज्ने स्तरमा विद्यार्थीले विकास गरेका छन्। उनीहरुले बजारमा घुम्दा दिसा लाग्यो भने कता जाने भनेर प्रश्न गरे। चोकहरुमा सार्वजनिक शौचालय राख्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो। सरकारले सबै वस्तीमा सरसफाइका गाडी पठाएर नगल्ने र विषाक्त फोहोर संकलन गर्नुपर्ने माग राखे। त्यसो नगरे प्लाष्टिकजन्य फोहोर जलाएर वातावरण प्रदूषण हुने बताए।
घोराही–१४ ले विद्यालय क्षेत्रमा सरसफाइ गर्न सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। शुक्रवार गरिएको अन्तक्र्रियात्मक सचेतना कार्यक्रममा विद्यार्थीहरुले होटल तथा पसलहरुमा हातले छोएको खुला खानेकुरा नखाने प्रतिबद्धता जनाउ“दै गाउ“टोलमा पुगेर त्यसबारेमा सचेतना जगाउने बताए। घर र विद्यालयको चर्पी नगन्हाउने बनाउने भएका छन्। यसरी विद्यालय क्षेत्रमा सरसफाइ अभियान सफल भए पूर्ण सरसफाइ हुने उनीहरुको भनाइ छ।
परिसरमा कुनै किसिमको फोहोर देखिन नदिने विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। जसले देख्छ उसले टिप्ने र कसैले पनि नखसाल्ने बानीको विकास गरिएको प्रअ श्रेष्ठको भनाइ थियो। खानेपानी, शौचालय र महिनावारीको स्वच्छतामा विद्यालय गम्भीर रहेको जानकारी दिदै सरसफाइ कोष बनाएर हर्पिक, सावुन, ब्रस किन्ने व्यवस्था मिलाउन खोजेको उहा“लो बताउनुभयो। कार्यक्रममा उपस्थित वडाका सदस्यहरु गुलाम रसुल, फुलमती नेपालीलाई इंगित गर्दै प्रअ श्रेष्ठले कोष स्थापना गर्न सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको थियो। शौचालय गन्हाउन नदिन आवश्यक उपाय अपनाइने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो।
Previous: राप्ती नदीमा मनपरी : मध्यरातमा समेत उत्खनन्
Next: जागेश्वर ब्राह्मण स्मृतिग्रन्थको विमोचन